यो मुलुकमा जे गरे पनि पाइन्छ भन्ने केही मान्छेलाई लागेको छ : दीपशिखा [भिडियो अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं- विभिन्न कुटपिटका घटनामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भातृ संस्था राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल संलग्न भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सत्ताको आडमा उनीहरुले यस्ता गतिविधि दोहोर्‍याइरहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुपर्ने युवाहरु सत्ताधारी दलको शक्तिको आडमा यस्ता गतिविधिमा किन संलग्न भइरहेका छन्? उनीहरुलाई उत्पादनशील र सृजनशील गतिविधिमा संलग्न गराउन किन सकिएको छैन? यसबारे नेकपाको युवा संगठनले के सोचिरहेको छ भन्नेबारे राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’सँग नेपाल लाइभकी पुष्पा केसीले कुराकानी गरेकी छिन्।
कुराकानीमा सापकोटाले अब राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सडकमा गएर टायर बाल्दै र नारा लगाउँदै गरेको नभेटिने बताए। उनले कम्तीमा यो राजनीतिक व्यवस्था पविरर्तन नभएसम्म युवा संघका सदस्य नारा, जुलुस लगाएको हिँडिरहेका नभेटिने दाबी गरे।
‘अब राष्ट्रिय युवा संघका कार्यकर्ताहरु सडक बनाइरहेको, वैचारिक बहस गरिरहेको देख्नुहुन्छ। विकास निर्माणका काममा जुटिरहेको देख्नुहुन्छ,' उनले भने, ‘पेरिसडाँडामा सपथ खाँदै गर्दा हामीले राष्ट्रिय युवा संघमा आवद्धताको तीन महिनभित्र कुनै न कुनै स्वरोजगार तथा रोजगारीको काममा जोडिनुपर्नेछ। नत्र युवा संघको सदस्य हुनका लागि अनुपयुक्त हुने पहिलो निर्णय गरेका छौं।’
सापकोटाले आफ्ना कार्यकर्तालाई के गर्ने भनेर व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक र स्वरोजगारको योजना बुँदागत रुपमा दिने पनि बताए। उनले प्रत्येक सदस्यको आयस्रोत देखिनेगरी ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बनाउने पनि दावी गरेका छन्। अब, संघको सदस्यले ठेकेदारको पछाडि लागेर, मुद्दा मिलाएर, हप्ता असुली गरेर पैसा ल्याउने नभई कमाएर ल्याउने बताए।
उनले दसैं र तिहारको बीचमा एकताको काम सम्पन्न गर्ने र संघका सदस्यलाई सृजनशील र उत्पादनशील बनाउन तिहार लगत्तै पहिलो अभियान सुरु हुने पनि जानकारी दिए।
त्यस्तै, सापकोटाले पछिल्लो समय अराजकताका विभिन्न समस्या भोगिरहेको भन्दै त्यसको रोकथाममा लागिरहेको पनि बताए। यो सरकार कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि पाँच वर्षका लागि जननिर्वाचित सरकार भएकाले राजनीतिक विषयलाई गैरराजनीतिक तरिकाले उठान गर्न नहुने बताए।
‘यो सरकार कसैलाई चित्त बुझे पनि नबुझे पनि पाँच वर्षका लागि जननिर्वाचित सरकार हो। यसले राष्ट्रघाती काम गरेको कसैसँग रेकर्ड छैन। सरकारले मुलुकको सार्वभौम र अखण्डतामा आँच आउने काम गरेको कसैसँग रेकर्ड छैन। नागरिकको जिउधनमाथि प्रश्न उठेको रेकर्ड छैन। बाँकी राजनीतिक विषय हुन्। राजनीतिक विषयलाई गैरराजनिक रुपमा उठान गर्न हुँदैन। यो अराजकता हो। राजनीतिलाई राजनीतिक तरिकाले डिल गर्नुपर्छ’, सापकोटाले भने।
‘अर्को, सामाजिक मनोविज्ञान अराजपूर्ण ढंगले बन्ने गरेको छ। केही मानिसहरु त्यो मनोविज्ञान बनाउनका लागि भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्। युवा संघले अराजकता विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवादको काम पनि गरिरहेका छौं। बीचमा एकीकरण र अकर्मण्यताको स्थिति पैदा भयो। र, यो मुलुकमा जे गरे पनि पाइन्छ, जे गर्न पनि छुट छ भन्ने केही मानिसलाई लाग्यो। पछिल्लो समय हामीले प्रतिवाद गर्‍यौं,' उनले थपे।
उनले जसरी एउटा मानिसले सामाजिक मर्यादाको ख्याल नगरी मुख चलाउन सक्छ, त्यसरी एउटा मानिसले सामाजिक मर्यादालाई अथवा कानुनलाई नमानेर हातपात गर्नसक्ने भन्दै दुवै प्रवृत्ति गलत भएको तर्क गरे। तर, कुटपिटका घटनामा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको कुनै संलग्नता नभएको पनि उनले दाबी गरे।